Cloth Nnyocha Machine
Itinye mama Machine
Edge akara Machine
The Global Textile Machinery Market na-eto eto na a CAGR nke 8,28% n'oge oge 2018-2022.
The Global Textile Machinery Market 2018-2022, a kwadebeere dabeere na-omimi ahịa analysis na ntinye si ụlọ ọrụ ndị ọkachamara. The akụkọ ekpuchi ahịa odida obodo na ya ibu atụmanya na-abịa abịa afọ. Akụkọ na-agụnye a ntụle nke isi mgbere ọrụ na nke a ahịa.
Dị ka akụkọ, otu ọkwọ ụgbọala na-akpali nke a ahịa bụ ọwụwa ina-abụghị kpara akwa. Nonwoven akwa na-engineered na-akpa ákwà na ngwaahịa na na-ewepụtara obere staple emep uta eri ma ọ bụ ogologo oge na-aga n'ihu emep uta eri, iji chemical ma ọ bụ n'ibu bonding usoro, ma na-abughi kpara ma ọ kpara. Non-kpara akwa na-arụpụtara site elu-ọsọ na ala-na-eri Filiks.
Otu na-emekarị na-emetụta nke a ahịa bụ akpaaka na akwa ígwè. Akpaaka na-arụ a dị oké mkpa ọrụ na rụọ àgwà na-eri-competitiveness na akwa n'ichepụta. Akpaghị aka akwa ígwè accelerates akwa mmepụta na-enwekwu ndị eruba ọnụego nke ákwà, si otú eme dabere n'ichepụta. Akpaaka na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime eriri n'ichepụta, yarn n'ichepụta, ịkpa ákwà, dyeing, na finishing Filiks.
Ọzọkwa, akụkọ na-ekwu na otu ihe ịma aka na-emetụta nke a ahịa bụ elu owu ahịa emetụta spinning ụlọ ọrụ. Cotton bụ otu ihe bụ isi ngwaọrụ maka spinning ụlọ ọrụ. The abawanye na owu ahịa na-emetụta ndị akwa ụlọ ọrụ na dum.
Okwu: 1.NO.28, Qianjia Industrial Park, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China